छारे रोगकै कारण विवाह नभएकी चेलीको व्यथा | Hamro Doctor News
बिहीबार, ९ बैशाख २०७८ /
महाराष्ट्रस्थित एक अस्पतालमा अक्सिजन लिक,सप्लाई बन्द हुँदा २२ जना बिरामीको मृत्यु
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि जारी गरेको आदेश उल्लघंन गरे कारबाही हुने
नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्यो, थप १० जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्रै प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन
छारे रोगकै कारण विवाह नभएकी चेलीको व्यथा
काठमाडौं, ५ पुष । उमेर पुगेकी छोरीलाई विवाह गरेर पठाउने हरेक आमाबाबुको चाहना हुन्छ । छोरीको विवाह गरिदिने चाहना हुँदाहुँदै पनि छोरीको स्वास्थ्यले साथ नदिँदा अभिभावकको मनमा चिसो पस्छ । यस्तै घटना भएको छ गुल्मी वीरबासको एक परिवारमा ।
गुल्मी वीरबासकी सरस्वती सापकोटा (नाम परिवर्तन) २४ बर्षकी भइन । उनी सापकोटा परिवारको माइली छोरी हुन् । उनको दिदी र बहिनीको विवाह भइसक्यो । सरस्वतीको पनि विवाह गरिदिन परिवारले नखोजेको होइन । तर, उनमा देखिएको स्वास्थ्य समस्याको कारण विवाह गर्न कोही तयार भएनन् ।
सरस्वती ६ बर्षदेखि छारेरोगबाट पीडित छिन् । एसएलसी सक्याएर प्लस टु पढ्दै गरेकी सरस्वतीले छारे रोगकै कारण पढाई समेत छोड्नुपर्यो । यही रोगका कारण उनको पढाई मात्रै छुटेको होइन विवाह समेत रोकिएको छ ।
प्लस टु पढ्दै गर्दा छारेरोग देखिएपछि सरस्वतीले कलेज जान छाडेकी थिइन् । कक्षाकोठामै बेहोश भएर ढल्न थालेपछि उनले पढ्न छोडेकी हुन । ‘लाज मानेर दिदी स्कूल जानु भएन ।’ सरस्वतीका भाइले भने ‘पहिला त केही थिएन तर, ६ बर्षअघि अचानक दिदीको आँखामा समस्या देखियो । उनका भाई सनम सापकोटाले सुरुसुरुमा दिदीलाई आँखामा झिमझिम हुने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएको बताए ।
रोगकै कारण उनलाई परिवारले जहाँ जाँदा पनि एक्लै छोड्ने गरेको थिएन् । ‘एक्लै छाड्दा कतिखेर, कहाँ के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले हामीले दिदीलाई बाहिर एक्लै जान दिएनौ ।’ सनमले भने । उपचारकै क्रममा भैरहवास्थित एक अस्पतालका चिकित्सकको भनाइ अनुसार चार बर्षदेखि औषधि सेवन गरे पनि निको नभएको सरस्वतीको भाइले बताए ।
चार बर्षपछि फेरि चिकित्सकसँग जाँच गराउँदा थप तीन बर्षको लागि औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बर्षौसम्म औषधोपचार गर्दा पनि निको नभएपछि परिवारले उपचारको लागि सरस्वतीलाई काठमाडौं ल्याएका छन् ।
डा. बसन्त पन्तको टोलीले उपचार गर्दै
काठमाडौंको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा सरस्वतीको मंगलबार सल्यक्रिया भएको छ । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. बसन्त पन्तसहितको टोलीले उनको उपचार गरिरहेको छ । डा. पन्तले यसअघि छारेरोग लागेका ८० जनाको सफल सल्यक्रिया गरिसकेका छन् ।
मस्तिष्कमा रहेको नशामा तरंगको प्रवाह चाहिने भन्दा बढी भए छारे रोग लाग्ने र त्यसबाट असामान्य स्थिति पैदा हुने डा. पन्तको भनाइ छ । सरस्वतीको आँखामा समस्या भएर छारेरोग भएका कारण त्यस सम्बन्धित अंगमा अपरेशन गरिएको उने बताए । औषधि उपचारबाट सम्भव नहुने छारेरोगका बिरामीलाई शल्यक्रिया गरेपछि पूर्ण निको हुने उनको भनाइ छ । यस्ता शल्यक्रियाबाट छारेरोग ९० प्रतिशत ठिक हुने उनले बताए ।
शल्यक्रिया गरेको तीन महिनासम्म दृष्टिमा केही समस्या भए पनि त्यसपछि बिरामी सामान्य अवस्थामा फर्कने डा. पन्त बताउँछन् ।
एकबर्ष अघि पोखराकी ३२ बर्षीया युवतीको पनि छारेरोगको शल्यक्रिया गरेको डा. पन्तले सम्भिए । उनले समयमै छारेरोगको उपचार गरे कुनै पनि बाबुआमाले छोराछोरीको विवाह नहुने होकी भन्ने चिन्ता लिनु नपर्ने बताए ।
छारेरोगको उपचारपछि सरस्वतीको विवाह गरिदिने परिवारको सोच छ । उनका भाई भन्छन्, ‘दिदीको राम्रो उपचारपछि विवाह होला सायद ।’
(अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिरहेकी युवतीको भाइसँगको कुराकानीमा आधारित । बिरामी र उनका भाइको नाम परिवर्तन गरिएको छ । )
Last modified on 2017-12-21 10:01:59
२४ घन्टामा देशभर थपिए २३ सय ५१ नयाँ संक्रमित, २ सय ८७ जना स्वस्थ
भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत चितवनका कोरोना संक्रमित ५२ वर्षीय पुरूषको मृत्यु
Samples Tested - २३,६९,४०१